Ukubuyekezwa kompompi weDelta, Umhlahlandlela Wokuthenga Wompompi Bekhishi laseDelta, ompompi basekhishini
Ikhaya / Blog / Ukubuyekezwa Kwetheyiphu Yekhishi LaseDelta: Umhlahlandlela Wokuthenga Ka-2021 Wompompi Bekhishi BaseDelta
2021 / 02 / 03 UkwahlukanisaBlog Umhlahlandlela Wompompi 12542 0
Ikhishi lakho lingaphezu kwendawo yokuphonsa ndawonye isidlo sakusihlwa. Kuyindawo yokubuthanela ekhaya lakho, futhi emindenini eminingi, kungumthombo wemfudumalo nenjabulo. Umpompi wasekhishini ofanele uzoqedela ukubukeka okufunayo ngenkathi wenza umsebenzi wakho wokupheka nokuhlanza ube lula.
Ukuze uthole lokho okulungele ikhishi lakho, hlola lezi zibuyekezo ze-Delta Faucet zezimpompi zethu zasekhishini ze-Delta.
1. U-Essa Donsela Phansi Umpompi Wekhishi
Umpompi wasekhishini ofanele udinga zonke izici ozifunayo ngaphandle kokushaya isabelomali sakho. Ngokulinganisela kwayo phakathi kwenani nezici ezisebenzisekayo, i- U-Essa Donsela Phansi Umpompi Wekhishi I-9113-AR-DST uphawula indawo ephezulu ohlwini lwethu ompompi basekhishini.
Ukuphathelene Diamond valve
IMagnaTite Docking yethumbu lokudonsela phansi
Izinketho ezine zokuqeda
Futha futhi usakaze imisebenzi
InnoFlex PEX kuhlanganiswe izindlela zokuhlinzeka
IDelta Essa Donsela Phansi Ikhishi Lompompi linomklamo olula onezici eziqondile, kepha kuyiklasikhi esifanelana kahle kunoma yiliphi ikhishi. Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu sine-plain, ijika elithambile elinesibambo esisodwa sokusebenza, kuyilapho i-hose yokudonsa ikunikeza konke ukuguquguquka okudingayo.
Enye yezintandokazi zabaninikhaya izimbobo zokufafaza ezithinta iTouch-Clean. Ungasasebenzisi amabhulashi wamazinyo noma okokuxubha amazinyo ukuzama ukuhlanza izimbobo ompompi wakho, ikakhulukazi uma amanzi akho eshiya ngemuva kokufakwa kwamaminerali.
2.Leland Donsela phansi ompompi
Kuthiwani uma uthanda imisebenzi yompompi wakwa-Essa kodwa ufuna ukuthi umpompi wakho ube yinto ehlelekile, yendabuko? I- ILeland Donsela Phansi Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu 9178-AR-DST ukukhetha okuhle.
Futha, usakaze, futhi ShieldSpray imisebenzi
ILeland inikela ngezici ezifanayo ne-Essa kodwa ngokungezwa kweShieldSpray Technology. Lokhu kudalwa kwe-Delta okusha kukunikeza ukusakaza okunamandla ngenkathi kunciphisa ukusakazeka. Cabanga ukugeza izitsha ngaphandle kokuthi uphinde uhlanze okweqile ngemuva kwalokho.
Ngenkathi iLeland ejwayelekile iza nazo zonke lezi zici eziphezulu, unenketho yompompi waseLeland nezinye izinketho ezithuthukile. Zama imodeli ngeTouch2Izilawuli zokuthinta noma utshale imali kumodeli esezingeni eliphakeme kakhulu nge-VoiceIQ, ikuvumela ukuthi ulawule ompompi nabasizi bakho bezwi abanjengo-Alexa noma i-Google.
Okwalabo abakhetha ukubukeka kwesimanje kunompompi wabo, i- I-Trinsic Single-Handle Faucet 9159-AR-DST kuyisinqumo esihle. Inazo zonke izici nokuthembeka kwanoma iyiphi i-Delta Faucet enesitayela esibushelelezi.
Izici nesitayela kuyefana phakathi kweTrinsic ne-Essa. Kodwa-ke, iTrinsic inenani lentengo eliphakeme. Okunye ukuqeda kuyabiza kakhulu kunabanye, noma ukukhetha okulungile kungakusetha amashumi eminyaka.
Njengamanye amamodeli akulolu hlu, iTrinsic isebenzisa ubuchwepheshe obuphambili be-Delta's Innoflex PEX ukunciphisa ubungozi bokuvuza kompompi wakho. Kubhangqwe ne-Delta's Diamond Seal valve, kuyenzela umpompi ohlala isikhathi eside ovikela ikhishi lakho ekuvuzeni nasekulimaleni kwamanzi.
4. I-Lenta Single-Handle Faucet
Njengoba uthenga ompompi, isitayela kuzoba yinto yokuqala ukudonsa iso lakho. I- I-Lenta Single-Handle Faucet 19802Z-CZ-DST iqinisekile ukuthi ikunake ngesisekelo sayo esiyisikwele esiyingqayizivele, kepha ayikhiphi ikhwalithi kule nqubo.
ILenta inazo zonke izici zakudala ozozilindela ku-Delta Faucet: i-valve esezingeni eliphakeme yokuphathelene, ulayini we-InnoFlex PEX, neMagnaTite Docking. I-ShieldSpray Technology edumile kanye ne-hose flexible yenza kube okuguquguqukayo ngokwanele ukuphatha cishe noma yimuphi umsebenzi.
Umehluko owodwa okufanele uwucabangele ukuthi ngokungafani namanye ompompi abaningi abakulolu hlu, i-Lenta ayinikeli ngenketho yokufaka i-VoiceIQ.
5. I-Essa Single-Handle Bar-Prep Faetet
I-Essa: isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu iDelta ibe yinhle bakwenza kabili. Lokhu I-Essa Single-Handle Bar-Prep FauceInombolo 9913-AR-DST iyafana nemodeli yakwa-Essa esiyibeke kunombolo eyodwa ohlwini lwethu, kodwa ngentengo ephansi kancane.
Izinhlobo ezimbili zakwa-Essa ziyefana kodwa zinomehluko omkhulu: lena incane. Isiphulu sepayipi le-Essa Pull-Down Faucet sifinyelela ngaphezu kwamasentimitha ayisishiyagalolunye ukusuka esisekelweni, kanti ukufinyelela kwale modeli kungaphansi kwamasentimitha ayisikhombisa. Le modeli encane ibuye ngamasentimitha angu-14.5 uma kuqhathaniswa ne-Essa Pull-Down Faucet engu-15.75-intshi.
Womabili la masayizi anokuhle nobubi bawo. Umpompi omkhulu uzokunika indawo ethe xaxa yokuhlanza izinto ezinkulu. Ngasikhathi sinye, akuwona wonke amakhishi anendawo yompompi omkhulu ngoba kunamakhabethe, amashalofu, noma ezinye izinto ezifakwe ngaphezu kosinki. Konke kumayelana nokukala isikhala sakho nokwazi ukuthi yini ongayifaka.
6. I-Addison Single-Handle Kitchen Sink Faucet
Uma ufuna ukubukeka okuyingqayizivele nokugobekile kompompi wakho wasekhishini, uzothanda ukwakheka kwefayela le- I-Addison Single-Handle Kitchen Sink Faucet 9192-AR-DST. Vele, kunezici eziningi zokusebenza ongazithanda futhi.
Akekho ongabeka i-Addison ubuqili. Cabanga ngaleli ompompi njengesiqeshana sendlela yokuhlobisa ekhaya okwenzeka futhi ukunikela ngezici ezinhle zompompi. I-Addison ayigcini nje ngokuba nomklamo wesitayela kepha ingumpompi ode kakhulu.
Ngaphezulu kwekhwalithi ethembekile yeDelta Faucet, i-Addison ifaka iShieldSpray Technology ukukunika amandla okufafaza aqinile nge-splatter encane. Ukufinyelela okuphawuleka kwe-spout okungu-10.34-intshi nokuphakama kwayo kukwenza ukwazi ukuhamba ngamabhodwe amakhulu nezinye izinto ezinzima kusinki.
Ukukhetha i-Delta Kitchen Sink Faucet yakho
Yonke imipompi yasekhishini engenhla inezinzuzo nezingozi zayo. Uma kukhulunywa ngakho, noma yikuphi, noma yikuphi kubo kungenza izengezo ezinhle ekhishini lakho ngesitayela nokusebenza.
TagIkhishi Faucets	Edlule :: Ukubuyekezwa Kwompompi Wendlu yangasese ye-Delta: Umhlahlandlela Wokuthenga wama-2021 Wompompi Bokugeza be-Delta Olandelayo: Ukubuyekezwa Kwamapayipi eDelta Shower: 2021 Umhlahlandlela Wokuthenga wama-Delta Shower ompompi